LG G4 ၏ပုံရိပ်များစွာကိုစစ်ထုတ်သည် Androidsis
ပြီးနောက် အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ဖြစ်သော Galaxy S6 နှင့် HTC One M9 အသစ်စတင်မိတ်ဆက်ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တဖြည်းဖြည်းသိကျွမ်းလာတော့သည် အဘယ်အရာကိုအဓိကလုပ်ငန်းဖြစ်လိမ့်မည် LG မှဒီနှစ်အတွက် LG G4 မှကြည့်မည် လာမည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အဘို့အယိုစိမ့်ကောင်းတဲ့တစည်း ဖုန်း၏ပထမ ဦး ဆုံးပုံရိပ်များဖြစ်နိုင်သည့်အရာများကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့လက်ထဲတွင်ရှိနေသောသတင်းများနှင့်အတူ၎င်း၏နောက်ဆုံးရောက်ရှိမှုကိုမျှော်လင့်နေသည်။
ပထမ ဦး ဆုံးပုံရိပ်တွေ ၎င်းတို့သည်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏အဓိကကုမ္ပဏီမှဟုတ်မဟုတ်သေချာမသိပါ ကင်မရာဆိုတာသိသိသာသာတိုးတက်လာဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ဖုန်း၊ LG G2015 လိုချင်တဲ့အရာနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ဖုန်းတစ်လုံး။ နောက်ဆုံးတွင် LG သည် G3 နှင့် G2 နှင့်အတူ Android အသိုင်းအဝိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောဖုန်းနှစ်လုံးဖြင့် LG ၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။
LG G4 ဟုအမည်ပေးထားသည်
XDA ကနေသူတို့ရှိသည် LG G4 အသစ်၏ပုံရိပ်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ နောက်ဘက်သည်ပထမပုံတွင်ပြသထားသည့်အတိုင်းအသံအတိုးအကျယ်သော့များနှင့်နောက်ဘက်ရှိပါဝါခလုတ်ကိုပြသည်။ ထုတ်လုပ်သူ၏ယခင်ဆိပ်ကမ်းများတွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသောအရာများသည်ကင်မရာ၏တည်နေရာနှင့်သော့များသည်လုံးဝပြောင်းလဲခြင်းမရှိပေ။ သို့သော်ဤအချိန်အတွက်အစိုင်အခဲအနက်ရောင်အရောင်ဖြင့်အမြင်အာရုံအသွင်အပြင်သည်။ LG G3 တွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းအတာသည်အလူမီနီယမ်နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။
အဘယ်အရာကိုperfectlyုံပုံပေါ်လျှင် Android version 5.0.2 နှင့်တည်ဆောက်ထားသောနံပါတ် LRX22G ပါသောဆော့ဝဲ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း။ စိတ်ကြိုက်အလွှာ၏အစိတ်အပိုင်းကိုနောက်ဆုံးပုံဖြင့်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် home key တွင်ပင်အရာအားလုံးသည်အထက်တွင်တွေ့ခဲ့သည့်အတိုင်းမည်သို့မည်ပုံဆက်လက်တည်ရှိနေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်နိုင်သည်။ သူတို့ဖုန်းကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ Custom layer ဆိုတာကိုသိသာထင်ရှားတဲ့အပြောင်းအလဲတွေရှိမလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။ ကုမ္ပဏီရဲ့စီအီးအိုကအရေးကြီးတဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံမှုတွေနဲ့အတူရောက်လာမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ကအချို့သောစီစစ်ထားသောပုံများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ကျနော်တို့ကောလာဟလအဖြစ်ယခုအချိန်တွင်အဘို့ထိုသူတို့ထားခဲ့ပါ LG G4 အသစ်ကိုအမှန်တကယ်ရင်ဆိုင်နေရပြီဆိုတာကိုတစ်ချိန်ချိန်မှာသေချာအောင်လုပ်ဖို့။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » ဒီဖုန်းက LG G4 ဖြစ်နိုင်မလား။
Ana Amelia ပါ ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ ကြည့်ကောင်းတယ်၊ ခဲတံလည်းရှိတယ်
Ana Amelia သို့ပြန်သွားပါ
LG G4 Note နှင့်တူသည်။ သူ၌ရှိသည့်မျက်နှာပြင်သည် G2 နှင့် G3 နှင့်အလွန်ကြီးမားသည်။
စိတ်ပျက်စရာ G3 ကင်မရာ? အသစ် Galaxy S4? …။ အနည်းဆုံးတော့မင်းမှာစာလုံးပေါင်းအမှားမရှိဘူး။ သင့်ကိုယ်သင်ပိုကောင်းအောင်အာရုံစူးစိုက်ပါ
စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ LG G3 ကင်မရာက G2 နဲ့အတူတူပဲ။ ဒါကြောင့်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတာကမကောင်းဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။ S4 ကမှားနေတယ်။ ငါ S6 ကိုဆိုလိုတာ။ တနင်္ဂနွေကောင်းပါစေ!